Mihetsika Ny Kroaty Manoloana Ny Fanambaran’ny ISIS Ny Fanapahan-doha An’i Tomislav Salopek · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2015 19:58 GMT
Tomislav Salopek eo am-pamakiana ny fitakian'ny ISIS anatinà lahatsary navoaka tamin'ny volana Jolay Loharano/ YouTube.
Ny 22 Jolay, Naka an-keriny an'i Tomislav Salopek, olom-pirenena Kroaty iray miasa any Kairo, Ejipta, ny ISIS, sampan'ny Al Qaeda tonga nifehy ireo faritra midadasika ao Iraka sy Syria, amin'ny fampiasana tetika feno habibiana, famoretana, ary herisetra. Telo herinandro taty aoriana, ny 11 Aogositra 2015, nambara fa notapahan-doha i Salopek, rehefa tsy feno ireo fangatahan'ny ISIS, hoy ny voalazan'ilay vondrona. Nozaraina manerana ireo mpampiasa ny media sosialy any amin'ny faritra ny sarinà vatana tsy misy loha ny Alakamisy 12 Aogositra teo, raha toa ka niangavy an'ireo mpampiasa sy ny media tsy hizara sary tahaka izany ireo media mahazatra sasany ao Kroasia. Araka ny Heavy.com, tsy mazava ny fotoana nanatanterahana ny famonoana, ary tsy hay ihany koa raha toa ka tena vatan'i Salopek ny teo amin'ireo sary.
Mangataka ireo mpamaky ihany koa izahay mba tsy hizara ilay sary ao amin'ny tambajotra sosialy, tsy ho fanajana fotsiny ihany an'i Salopek, sy…. [ny fianakaviany, fa koa satria ny famoahana sary tahaka izany no irian'ireo mpampihorohoro ao amin'ny ISIS.]
Nampahafantatra ny fakàna an-keriny an'i Salopek tanatinà lahatsary YouTube ny ISIS tamin'ny volana Jolay, mampiseho an'i Salopek mandohalika, mihazona gazety iray vao haingana sady miteny fa hovonoina izy afaka 48 ora, raha tsy avoakan'i Ejipta avy ao am-ponjany ny andiana vehivavy Silamo iray.
Nanao valandresaka tsy nampoizina ny Praminisitra Kroaty Zoran Milanović, taorian'ny vaovao mikasika ny famonoana an'i Salopek, nanambara fa mbola tsy tena marim-pototra tsara raha toa ka an'i Salopek tokoa ilay vatana tapa-doha hita anatin'ireo sary mivezivezy any anaty aterineto na tsia, saingy manahy ny ratsy izy amin'ity tranga iray ity. Nanontany ny Praiminisitra Milanović ny iray tamin'ireo mpanao gazety tao amin'ilay valandresaka raha toa ka hirona hiady mafy hifanandrina amin'ny ISIS i Kroasia ankehitriny, ary namaly ny Praiminisitra hoe:
Tsy handray anjara amin'ny ady enti-manohitra ilay antsoina hoe Fanjakana Islamista i Kroasia. Zavatra tsy maintsy hataon'ny hafa izany.
Hatramin'ny nivoahan'ireo sary, mangataka an'ireo mpanao gazety hafa sy ireo mpampiasa aterineto amin'ny ankapobeny ireo fampahalalam-baovao mahazatra mba tsy hizara ilay sary mahabe adihevitra sy hanaja ny fianakavian'i Salopek mandritra ny fotoana heverina fa mafy indrindra.
Voadona i Kroasia ary ampahany maro amin'ny vondrom-piarahamonina Twitter ao an-toerana no mizara fiaraha-miory amin'ny fampiasana ireo tenifototra #TomislavSalopek sy #Salopek.
Raim-pianakaviana i Tomislav Salopek, 31 taona ary manan-janaka roa, miasa toy ny manam-pahaizana amin'ny fanajariana ny tany ho anà orinasa Frantsay iray any Ejipta. Nifindra tany Ejipta izy mba hahazo asa tsara kokoa, ny hany tanjony dia ny mba hanana ny ampy ho an'ny fianakaviany.
#Croatia People mourning for Tomislav #Salopek by putting black profile pictures on social networks
Misaona an'i Tomislav Salopek ny vahoaka Kroaty amin'ny alalan'ny fametrahana sary mainty eo amin'ny sary famantarana anaty tambajotra sosialy
Miraraka ao anaty tambajotra sosialy ireo hafatra fampiononana sy firaisankina hatramin'ny nipoiran'ireo vaovao momba ny fanapahana ny lohany. Avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ireo hafatra ireo, amin'ny teny maro isankarazany. Ny Ambasadaoro Britanika any Ejipta John Casson, ohatra, dia nitoraka bitsika manao hoe:
Mahatsiaro an'i Tomsilav Salopek anio alina. Ireo Kroaty , Ejiptiana, ary ireo Britanika no indray hiara-hanohitra ireo jiolahy tsy matahotra an'Andriamanitra izay naka azy.
Niantso ny fanapahan-doha an'i Salopek ho “asan-devoly” ilay Ejiptiana mpitondra fivavahana lehibe Al-Azhar sady nanamafy fa “tsy misy hidiran'ny fivavahana na ny fombafomba” izany, ka manameloka an'io sy ireo zavatra hafa mitovy aminy ataon'ny ISIS, tao anatinà fanambaràna.
Ireo fanehoan-kevitra avy amin'ireo Kroaty mpampiasa media sosialy dia mampiseho ny fangarona alahelo ho an'ny olom-pireneny, sy fahatairana, ary hatezerana amin'ny ISIS sy ireo andiana mpampihorohoro mitovy aminy.
Mandria am-piadanana ry T. Salopek. Ary mialohan'ny hamenoan'ny fankahalàna voamarina ny tenanao, tadidio fa, tsy mitovy avokoa “izy ireo” ary tsy ny silamo rehetra no tokony homena tsiny.